ईश्वरले भन्नुभए अनुसारै गर्नुहोस्
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको इसोको ईवी उङ्गाबेरे उन्डुबेली उम्बुन्डु उर्दू एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किसी किसोंगे कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चुभास चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ डच डेनिश ड्रेहु तामिल तेलगु त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (सेन्ट्रल) नेपाली नोंगा पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मझतेक (हुआट्ला) मराठी मल्यालम माम माया मालागासी माल्टिज मिजो मिहे मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा वलिसियन वायुनाइकी वोलाइटा शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
“तपाईं एकचोटि भनेर त हेर्नुस्, म गरिहाल्छु नि!” आफूले पटक्कै नचिनेको अथवा अलिअलि मात्रै चिनेको व्यक्तिलाई सायद तपाईं यसो भन्नुहुन्न होला। तर आफ्नो घनिष्ठ साथीलाई भने यसो भन्न तपाईं अप्ठेरो मान्नुहुन्न। घनिष्ठ साथीहरू खुसीसाथ एकअर्काले भनेअनुसारै गर्न तयार हुन्छन्‌।
यहोवा परमेश्वर पनि सधैं आफ्ना उपासकहरूलाई आनन्दित तुल्याउने काम गर्नुहुन्छ भनी बाइबलले देखाउँछ। उदाहरणको लागि, ईश्वरसित घनिष्ठ भएका राजा दाऊदले यसो भनेका थिए: ‘हे परमप्रभु मेरा ईश्वर, तपाईंले गर्नुभएको अचम्मका कामहरू र हामीतर्फको तपाईंको विचार धेरै नै छन्‌। यदि तिनको विषयमा भनेर मैले बोलें भनेता तिनको गन्ती हुनैसक्तैन।’ (भजन ४०:५) तर कुरा यति मात्र होइन। यहोवा उहाँलाई नचिन्ने व्यक्तिहरूको पनि भलो हुने काम गर्नुहुन्छ। उहाँले ‘खानेकुरा अनि आनन्दले तिनीहरूको मन भरिदिनुहुन्छ।’—प्रेषित १४:१७.
हामी खुसीसाथ आफूले माया अनि आदर गरेका व्यक्तिहरूको भलो हुने काम गर्छौं
यहोवा खुसीसाथ अरूलाई आनन्दित तुल्याउने काम गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँको साथी बन्न चाहने व्यक्तिहरूले पनि उहाँको “हृदयलाई आनन्दित” तुल्याउने कामहरू गर्नुपर्छ। (हितोपदेश २७:११) उहाँलाई खुसी पार्न तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ? बाइबल यस्तो सुझाव दिन्छ: ‘भलाइ गर्न अनि अरूसित बाँडचुँड गर्न नबिर्स, किनकि यस्तै बलिदानहरूसित ईश्वर असाध्यै खुसी हुनुहुन्छ।’ (हिब्रू १३:१६) यसको मतलब ईश्वरलाई खुसी पार्न अरूको भलो हुने काम गर्नु र उनीहरूसित बाँडचुँड गर्नु मात्रै पर्याप्त छ भन्ने हो त?
बाइबल भन्छ: ‘विनाविश्वास ईश्वरलाई खुसी पार्न असम्भव छ।’ (हिब्रू ११:६) यो कुरा विचार गर्नुहोस्: “अब्राहामले यहोवामा विश्वास गरे” र त्यसपछि मात्र “तिनी ‘यहोवाको मित्र’ कहलाइए।” (याकूब २:२३) ईश्वरको आशिष्‌ पाउन चाहन्छौं भने ‘उहाँमाथि विश्वास गर्नु’ आवश्यक छ भनेर येशू ख्रीष्टले बताउनुभएको थियो। (यूहन्ना १४:१) त्यसोभए ईश्वरले आफूतिर खिच्नुहुने व्यक्तिहरूमा जुन विश्वास भएको चाहनुहुन्छ, त्यो विश्वास तपाईं कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? सबैभन्दा सुरुमा त ईश्वरको वचन बाइबल नियमित रूपमा अध्ययन गर्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने तपाईंले ‘उहाँको इच्छाबारे सही ज्ञान’ पाउनुहुनेछ र “उहाँलाई पूरै प्रसन्न बनाउन” के गर्नुपर्छ भनेर सिक्नुहुनेछ। यहोवाबारे जति धेरै सही ज्ञान हासिल गर्दै जानुहुन्छ र उहाँका स्तरहरूबारे सिकेअनुसारै गर्नुहुन्छ, उहाँमाथिको तपाईंको विश्वास पनि बढ्दै जानेछ। अनि उहाँ तपाईंसित पहिलाभन्दा झन्‌ घनिष्ठ हुनुहुनेछ।—कलस्सी १:९, १०.
जीवन जिउने सर्वोत्तम मार्ग
तीन वटा कदम चाल्नुभयो भने तपाईं ईश्वरको साथी बन्न सक्नुहुनेछ।
परमेश्‍वर मबाट के चाहनुहुन्छ भनेर बुझ्न मलाई विशेष चिन्ह, दर्शन वा बोलावट चाहिन्छ? बाइबलको जवाफ थाह पाउनुहोस्‌।
Text डिजिटल प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प प्रहरीधरहरा डिसेम्बर २०१४ | तपाईं ईश्वरको साथी बन्न सक्नुहुन्छ